Ii-FAQs-Isiqinisekiso se-Guangzhou MCM&Testing Co.,Ltd.
Kutheni kufuneka sifumane isatifikethi?
Ilizwe ngalinye lineenkqubo zokuqinisekisa ukukhusela impilo yomsebenzisi kwiingozi kunye nokuthintela ukubanjwa kwe-spectrum.Ukufumana isiqinisekiso yinkqubo enyanzelekileyo phambi kokuba imveliso ithengiswe kwilizwe elithile.Ukuba imveliso ayiqinisekiswanga ngokuhambelana neemfuno ezifanelekileyo, iya kuba phantsi kwesohlwayo esisemthethweni.
Ngaba uvavanyo lwasekhaya luyafuneka kwisiqinisekiso sehlabathi?
Amazwe amaninzi anenkqubo yombutho wovavanyo afuna uvavanyo lwasekhaya, kodwa amanye amazwe anokutshintsha uvavanyo lwasekhaya afake izatifikethi ezifana ne-CE/CB kunye neengxelo zovavanyo.
Loluphi ulwazi olusisiseko okanye uxwebhu ekufuneka ndilunike uvandlakanyo lweprojekthi entsha?
Nceda unikeze igama lemveliso, ukusetyenziswa kunye neenkcukacha zovavanyo.Ngolwazi oluthe kratya, zikhululeke ukunxibelelana nathi.
Ngaba usuku olusisinyanzelo lwesiqinisekiso sebhetri yaseMalaysia luqinisekisiwe?Inini lonto?
UMphathiswa wezoRhwebo lwaseKhaya kunye neMicimbi yabaThengi (KPDNHEP) usebenza ekuqulunqeni nasekuphuculeni inkqubo yoqinisekiso kwaye kulindeleke ukuba ibe sisinyanzelo kungekudala.Siza kukwazisa xa kukho naziphi na iindaba.
Ukuba ibhetri ye-lithium iya kuthunyelwa ngaphandle kuMntla Melika kwaye ithengiswe kwivenkile enkulu, sesiphi isatifikethi endifuna ukusifumana ngaphandle kwe-UL 2054 kunye ne-CTIA?
Kufuneka ubhalise imveliso kwi-WERCSmart system kwaye yamkelwe ngabathengisi.Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ngokusisiseko, lusebenza njani ubhaliso lweCRS kunye nesatifikethi kwiseli kunye nebhetri?
Okokuqala, iisampulu zovavanyo ziya kuthunyelwa kwiilebhu ezifanelekileyo eIndiya.Emva kokuba uvavanyo lugqityiwe, iilebhu ziya kukhupha ngokusemthethweni ingxelo yovavanyo.Ngelo xesha, iqela le-MCM liya kulungiselela amaxwebhu ahambelanayo okubhalisa.Emva koko, iqela le-MCM lingenisa ingxelo yovavanyo kunye namaxwebhu anxulumeneyo kwiphothali ye-BIS.Emva koviwo ngamagosa e-BIS, kuza kuveliswa isatifikethi sedijithali kwi-BIS portal efumanekayo ukuba ikhutshelwe.
Ngaba umrhumo wesiqinisekiso se-BIS uyatshintsha phantsi kweempembelelo ze-COVID-19?
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho xwebhu lusemthethweni lukhutshiweyo yi-BIS.
Ngaba ungabonelela ngenkonzo yommeli wasekhaya waseThai ukuba ndifuna ukuya kwisatifikethi se-TISI?
Ewe, sinikezela ngenkonzo yommeli wendawo yaseThai, inkonzo enye yokumisa yesatifikethi se-TISI, ukusuka kwimvume yokungenisa, ukuvavanywa, ukubhaliswa kokuthumela ngaphandle.
Ngaba ixesha lakho lokuhamba kwesampulu yovavanyo lwe-BIS ichatshazelwa yi-Covid-19 kunye noxinzelelo lwezopolitiko?
Hayi, siyakwazi ukuthumela iisampulu ezivela kwimithombo eyahlukeneyo yokuqinisekisa ukuba ixesha lokukhokela lingachaphazeleki.
Sifuna ukwenza isicelo sesiqinisekiso, kodwa asazi ukuba luhlobo luni lwesatifikethi ekufuneka sisifake isicelo.
Unokusinika inkcazo yemveliso, ukusetyenziswa, ulwazi lwekhowudi ye-HS kunye nommandla wokuthengisa okulindelekileyo, ngoko iingcali zethu ziya kukuphendulela.
Ezinye iziqinisekiso zifuna ukuba iisampulu zithunyelwe kuvavanyo lwasekuhlaleni, kodwa asinalo ijelo lokungena.
Ukuba ukhetha i-MCM, siya kukunika inkonzo yokumisa enye "yokuthumela iisampuli -- uvavanyo -- isatifikethi".Kwaye sinokuthumela iisampulu eIndiya, eVietnam, eMalaysia, eBrazil nakweminye imimandla ngokukhuselekileyo nangokukhawuleza.
Xa ndifaka isicelo sesiqinisekiso sebhetri okanye seeseli zamazwe ngamazwe, ngaba kufuneka ndifake isicelo sokuhlolwa kwefektri?
Ngokuphathelele kwiimfuno zokuhlolwa kwefektri, kuxhomekeke kwimigaqo yoqinisekiso lwamazwe athumela ngaphandle.Umzekelo, isatifikethi se-TISI eThailand kunye noHlobo loku-1 lwesiqinisekiso se-KC eMzantsi Korea zonke zineemfuno zophicotho lwefektri.Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngolwazi oluthile.
Ngaba iqhosha leseli/ibhetri liphantsi kwesiqinisekiso esisisinyanzelo?
Ukususela ekubeni i-IEC62133-2017 yaqala ukusebenza, kuye kwaba yisiqinisekiso esisinyanzelo, kodwa kwakhona kufuneka kugwetywe ngokwemigaqo yesatifikethi yelizwe apho imveliso ithunyelwa ngaphandle.Kufuneka kuqatshelwe ukuba iiseli zeqhosha / iibhetri azikho ngaphakathi kwendawo yesatifikethi se-BSMI kunye nesatifikethi se-KC, oku kuthetha ukuba awudingi ukufaka isicelo se-KC kunye ne-BSMI yokuqinisekisa xa uthengisa iimveliso ezinjalo eMzantsi Korea naseTaiwan.